गर वा मरको अवस्थामा सन्दीपको टिम लाहोर ! | Hamro Khelkud
गर वा मरको अवस्थामा सन्दीपको टिम लाहोर !
एजेन्सी – नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको टिम लाहोर कलन्दर्सले पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) अन्तरगत २५ औं खेलमा आज पेशावर जाल्मीसँग खेल्दै छ । खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका ५ः१५ देखी आवुधाबीमा सुरु हुनेछ ।
अघिल्लो चरणको झिनो आसा कायमै राख्न लाहोरलाई आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ ।आजको खेलमा लाहोर पराजित भएको खण्डमा अघिल्लो चरणको यात्रा लगभग सकिने छ । जारी पिएसएलमा लाहोरले ७ खेलमा ३ मा जित र ४ मा हारका साथ ६ अंक जोड्दै पाँचौ स्थानमा छ । पेशावरले ८ खेलमा ५ मा जित र ३ मा हारका साथ १० अंक जोड्दै तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ । पेशावरमा हसन अली, काइरान पोलार्ड, क्रिस जोर्डन, राजा जस्ता स्टार खेलाडी रहेका छन् । पछिल्ला ५ खेलमा लाहोर पेशावरसँग पराजित भएको छ ।
लाहोरका कप्तान एवि डी भिलियर्स घाईते भएका छन् । योसँगै अव डी भिलियर्सले पीएसएलका बाँकी खेल गुमाउने उच्च संभावना छ । कप्तान समेत रहेका डी भिलियर्स लाहोरमा नहुँदा प्रर्दशनमा ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जारी पिएसएलमा सन्दीपले ४ खेलमा १० विकेट लिई सकेका छन् ।
सन्दीपले आजको खेलमा दुई भन्दाबढि विकेट लिन सके सर्वाधिक विकेट लिने सुचिको दोस्रो स्थानमा उक्लिने छन् । सन्दीप हाल चौथौ स्थानमा छन् । ८ खेलमा १८ विकेट लिदै हसन अली शिर्ष स्थानमा हुँदा समान खेलबाट १२ विकेटलिदै सोहेल तनविर दोस्रो स्थानमा छन् । सन्दीप पीएसएल पछि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्न दिल्ली जानेछन् ।